‘लोग्ने’भन्दा ‘लोग्नेमान्छे’ गजब | मझेरी डट कम
ढिकी, जाँतो, ओखल, सिलौटौ सबै बन्द भए । विज्ञान र प्रविधिको चमत्कारले मिलको विकास भयो, लोग्नेकै पिठिउँमा धोक्रो र थाप्लोमा नाम्लो थोपरियो । स्वास्नीले डोकोमा दाउरा बोक्ने चलन हरायो, ग्याँसको सिलिण्डरले लोग्नेकै काँधमा चढ्ने मौका पायो । मलाई त लाग्छ घरदेखि परसम्मको काममा पुरुष नै लाग्ने हुनाले ‘लाग्ने–लागिरहने–लाग्ने–लागिरहने’ शब्द अपभ्रंश भएरै ‘लोग्ने’ शब्द बनेको होला । तीजको एकराते जाग्राममा लोग्नेको दुई महिनाको वेतन स्वाहा १ तैपनि ‘फलानीको फलान्थोक जस्तो मेरो भएन’ रे । ‘नामर्दकी स्वास्नी हुनुको पीण्डा आज बल्ल भोगें’ अरे । ‘जाग्राममा नाच्ने ठिटो पो ठिटो त तिमी त ..........’ रे । धन्य हो स्वास्नी १ मेरो गणितले भन्छ ‘माइनस (–) पतिदेवो भव: प्लस (ं) ठिटो देवो भव: बराबर (.) तीजको व्रत ।
एउटा जिब्रो बत्तीसओटा दाँत । दाँतभन्दा तिखारिएका दाँतैपिच्छेका कुराहरू । एक पटक उसँग जम्मा रु. दुई हजार सापट लिएको थिएँ । त्यही पैसा दुईपटक पूराको पूरा चुक्ता गरिसकें । अँझै रु. दुई हजार पाँच सय बाँकी छ रे । आफ्नो गणित त्यति कडा छ । लोग्नेको गणित गणितै होइन । पाक्षिक रुपमा केशलाई काँचो चाउचाउ जस्तो कर्ली बनाउन रु. दुई हजार पाँच सय, त्यसैलाई पुन: काँचो चाउमिन जस्तो स्टेट बनाउन रु तीन हजार पाँच सय, हप्तैपिच्छे आँखी भौं खुर्केर खुर्पा आकार बनाउन रु. दुई सय, नङ्ग्रा काट्न रु. दुई सय, नङ्ग्रा घोट्न रु. दुई सय, नङ्ग्रा पोत्न रु पाँच सय, आवश्यकता अनुसार गाला रङ्ग्याउन रु पाँच सय, ओठ रङ्ग्याउन रु. तीन सय, आँखा अङ्गार बनाउन रु चार सय ८०, फेसवास रु पाँचसय........
खानु कता हो, घरभाडा कता हो, टिएडिए कता हो, औषधी उपचार कता हो...... । भनिसकें महिना मरेपछि आउने वेतन र यो हिसाव मिलाउने गणितको टिचर आजसम्म फेला पार्न सकिएको छैन ।
यत्ति गरीकन ढुक्क कहाँ छ र १ गर्भवती हुँदाको घमण्ड बेग्लै छ – ‘हामीले जस्तो नौ महिनासम्म गर्भ बोक्नुपरे अनि थाहा पाउँथ्यौ तिमी लोग्नेहरुले’ अरे । फिसिक्क हाँस्न मन लाग्छ– ‘जसले एक क्वीण्टल बराबरकी यमानकी स्वास्नी जीवनभर बोकेर हिँड्न सक्छ त्यसले परिआएको खण्डमा जाबो अढाई–तीन किलोको डल्लो नौ महिनासम्म पेटमा बोक्न नसक्ला त ?’ कुनै–कुनै बेला त रिसले कन्सिरी पनि तात्तिन्छ । फूली र मुन्द्री नहुँदो हो त नाकको डाँडी भाँचिदिन्थें होला । टपका लस्कर नहुँदा हुन् त जर्नीसहित कान उखेलिदिन्थें होला तर के गर्नु आफ्नै गहना कुच्चिने डर । ३३ प्रतिशतले दुई तिहाइ अर्थात् ६७ प्रतिशतलाई के साह्रो हेप्नु त हेप्न पनि ? तर ..... ।
सिंहवाहिनी -२४- चौबीसौं अध्याय (देवतासँग देवीको भविष्यबाणी)
म कस्तो छु !!
म मानव हुँ